Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ncheta nri ọhụrụ: Charcuterie Fortin ika Salami
Charcuterie L. Fortin Ltée. na -echeta akara Charcuterie Fortin Salami site n'ọma ahịa n'ihi na ọ nwere ike ịnwe ọka wit nke ekwughị na akara ahụ. Ndị nwere ọka wit ma ọ bụ nwee ọrịa celiac ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ metụtara gluten ekwesịghị iri ngwaahịa echetara nke akọwapụtara n'okpuru.
Eresịla ngwaahịa ndị a na Quebec.
Ọ bụ Charcuterie Fortin salami 175 g 6 28555 04100 4 Dị mma tupu
Ọ bụrụ na ị nwere nfụkasị ọka wit ma ọ bụ nwee ọrịa celiac ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ metụtara gluten, erila ngwaahịa echetara n'ihi na ọ nwere ike bute mmeghachi omume siri ike ma ọ bụ nke na-eyi ndụ egwu.
Ụlọ ọrụ kpalitere ncheta a. Agencylọ ọrụ nyocha nri Canada (CFIA) na -eme nyocha nchekwa nri, nke nwere ike ibute icheta ngwaahịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na echetara ngwaahịa ndị ọzọ dị oke egwu, CFIA ga-eme ka ọha mara site na ịdọ aka na ntị ncheta nri.
CFIA na -ekwenye na ụlọ ọrụ na -ewepụ ngwaahịa echetara n'ahịa.
Enwebeghị mmeghachi omume ọ bụla metụtara oriri ngwaahịa a.